बम आक्रमणप्रति निर्वाचन आयोगद्धारा निन्दा
मंगलबार मङ्सिर १९ , २०७४
नुवाकोट मंसिर १९, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई बिथोल्ने गरी बम आक्रमण गराइएकोमा निन्दा गरेको छ । आज राजधानीमा भएको एक साक्षात्कारमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलेसुरक्षाको पूर्णप्रत्याभूति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभएको छ ।
पछिल्ला दिनमा सुरक्षाको वातावरणमा क्रमिक सुधार आएको भएपनि निर्धक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण बनाउन सरकार अझै चनाखो बन्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।अत्यावश्यकीय सामग्रीसहित निर्वाचन कर्मचारीहरु मतदान केन्द्रहरुमा पुगिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले मतदान केन्द्रहरुमा सीसीटीभीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी गराउनुभयो ।
४५ ओटै जिल्लामा सूक्ष्म अनुगमनकर्ताले काम गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।मतदाताहरु मत दिन उत्साहित रहेको भन्दै उहाँले यसपटक ७० प्रतिशतसम्म मत खस्नसक्ने अनुमान गर्नुभयो । मौनअवधिभर प्रचारका कुनै काम नगर्न उम्मेदवारहरुलाई आग्रह गर्दै उहाँले आचारसंहिता उल्लंघन गरिए कडा कारबाही गरिने प्रस्ट पार्नुभयो । निर्वाचनसम्पन्न भएको एक साताभित्रै सबै परिणाम आउने पनि डा. यादवको भनाइ छ ।